ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: အခုရှုပ်မှ နောင်ရှင်း
(Kyaw Swar Myint ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှ မူရင်းသတ်ပုံအတိုင်း ကူးယူဖော်ပြပါသည်။)
ကျွန်တော် ကြံ.ခိုင်ဖွံ.ဖြိုးရေးပါတီထဲသို.၀င်တော.မည် ။ ဘယ်သူတွေဘာထင်ထင် ကျွန်တော်ဝင်မည် ။ ဒီခေတ်မှာနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုတော.နောက်ခံရှိထားမှဖြစ်မည် ။ သူများတွေဝင်သော ပါတီထဲသို.လည်း အုတ်အရောရောကျောက်အရောရော သူများလုပ်တိုင်းလိုက်လုပ်ကာ ရောတိရောရာ မလုပ်ချင် ။ ကိုယ်ထင်တာ ကိုယ်လုပ်တာ ကျွန်တော်.၀ါသနာဖြစ်သည် ။ ပြည်ထောင်စုကြံ.ခိုင်ရေးနှင်.ဖွံ.ဖြိုးရေးပါတီကို ကျွန်တော်ကြိုက်သည် ။ ယခင်ပါတီဥက္ကဌ ဦးသိန်းစိန်သည် လာဘ်မစားဘူးဟု နာမည်ကျော်ကြားသော Mr. Clean ဖြစ်သည် ။ ယခုပါတီဥက္ကဌဖြစ်သူ၊ သူရဦးရွှေမန်းသည် တိုင်းပြည်ကောင်းအောင် လုပ်နိုင်မည်.သူတစ်ဦးဖြစ်သည် ဟု ကျွန်တော်ယုံသည် ။ ထို.ကြောင်.ပါတီသို.ကျွန်တော်ဝင်မည် ။သို.သော် ကျွန်တော်သည် ဥာဏ်ရည်နုံနဲ.သူဖြစ်သည် ။ ကြံ.ခိုင်ဖွံ.ဖြိုးရေးပါတီနှင်.ပါတ်သက်လာလျင် ကျွန်တော် မရှင်းလင်းသော ၊ မည်သို.မျှ မစဉ်းစားတတ်သော ကိစ္စလေးအနည်းငယ်ရှိသည် ။ မေးခွန်းအနည်းငယ်ရှိသည် ။
ခုရှုပ်မှ နောင်ရှင်း ဆိုသလို ထိုကိစ္စများကို သက်ဆိုင်ရာပါတီခေါင်းဆောင်များမှ ကျွန်တော် သဘောပေါက် နားလည်လာအောင် ရှင်းပြနိုင်ပါက အလွန်ကျေးဇူးတင်မိပေမည် ။ ရှင်းပြမည်ဟုလည်း ယုံကြည်မျှော်လင်.ပါသည် ။ ထိုအခါ ကျွန်တော်သည် ပါတီထဲသို. ၀င်ရန်သာရှိပါတော.သည် ။
ပထမအချက်အနေဖြင်.ကျွန်တော် မေးလိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုကြံ.ခိုင်ရေးနှင်.ဖွံ.ဖြိုးရေးအသင်းနှင့် ပြည်ထောင်စုကြံ.ခိုင်ရေးနှင်.ဖွံ.ဖြိုးရေးပါတီသည် အတူတူပဲလားဟူသော မေးခွန်းဖြစ်ပါသည် ။အဘယ်.ကြောင်.ဆိုသော် ပြည်ထောင်စုကြံ.ခိုင်ရေးနှင်.ဖွံ.ဖြိုးရေးအသင်းသည် အစိုးရပိုင်အသင်းကြီးဖြစ်ခဲ့သည် ။ အစိုးရပိုင်အသင်းဖြစ်စဉ်က အသင်းပိုင်ရုံးခန်းများ၏ မြေနေရာနှင်. အဆောက်အဦ အားလုံးသည် နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာငွေဖြင်.တည်ဆောက်ထားသော ရုံးခန်းများဖြစ်သည် ။ ထိုသို. နိုင်ငံတော်ပိုင်မြေနှင်.ရုံးများသည် အသင်းကြီးအဖြစ်မှ နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုအဖြစ်သို. ပြောင်းလဲလိုက်သောအခါ နိုင်ငံတော်ပိုင်ပစ္စည်းများကို နိုင်ငံတော်သို.ပြန်အပ်ရမည်ဖြစ်သည် ။ နိုင်ငံရေးပါတီဆိုသည်မှာ နိုင်ငံတော်ပိုင်မဟုတ်သဖြင်. ယခင်နိုင်ငံတော်ပိုင်အသင်းကြီး၏မြေနေရာ ၊ဘဏ္ဍာငွေ ၊အဆောက်အဦ ၊ လက်ကျန်ငွေ ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစသည်များကိုတစ်ခုမကျန် နိုင်ငံတော်သို.ပြန်အပ်ရပေမည် ။ ပြည်သူတို.၏ ချွေးနည်းစာဖြစ်သော နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာငွေသည် ပါတီတစ်ခုအတွက်သုံးလို.ရမရ ကျွန်တော်သိချင်သည် ။
ထို.ကြောင်.ကြံ.ခိုင်ရေးအသင်းကြီး၏မြေများ ၊ တိုက်များ ၊ ရုံးခန်းများ ၊စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီက မိဘအမွေသားသမီး ဆက်ခံသလို ယူလိုက်ခြင်းမှာ တည်ဆဲဥပဒေနှင်.ညီမညီ ၊နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင်. ဖွံ.ဖြိုးရေးကောင်စီသည် ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းများကို နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုသို.ကိုယ်.သဘောနှင်. ကိုယ်ပေးပိုင်ခွင်.ရှိမရှိ ၊ ပြည်ထောင်စုကြံ.ခိုင်ရေးနှင်.ဖွံ.ဖြိုးရေးပါတီသည် နိုင်ငံပိုင်ပစ္စည်းကိုပါတီအတွက် လွှဲပြောင်းရယူပိုင်ခွင်. ရှိမရှိ ကျွန်တော် သိလိုပါသည် ။
ဒုတိယ သိလိုသည်မှာ အသင်းကြီးကို စတင်တည်ထောင်သူ နာယကကြီးဖြစ်သော အငြိမ်းစား ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွေအကြောင်း ဖြစ်သည် ။ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီသည် ပြည်ခိုင်ဖြိုးအသင်းမှ ဆင်းသက်လာသည်ဖြစ်ရာ အသင်းကြီး၏ မူလစတင်တည်ထောင်သူတစ်ယောက်အကြောင်းကို ပါတီက ရှင်းပြနိုင်လိမ်.မည်ဟု ယူဆ၍ မေးရခြင်းဖြစ်ပါသည် ။ ကျွန်တော် သိလိုသည်မှာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ (ငြိမ်း) ယခုနေနေသော အိမ်တော်ဟုခေါ်သည်. နေပြည်တော်မှ မြေနေရာနှင်.အဆောက်အဦသည် သူချွေးနည်းစာဖြင်. လစာဝင်ငွေထဲမှ စုဆောင်းကာ ဆောက်လုပ်ထားခြင်းလော ၊ သို.တည်းမဟုတ် နိုင်ငံတော်ပိုင်ဘဏ္ဍာငွေများဖြင်. ဆောက်လုပ်ထားခြင်းလော မရှင်းသဖြင်.မေးချင်ပါသည် ။
သူ.ငွေဖြင်.သူ ဆောက်လုပ်ထားပါသည်ဟု တစ်ခွန်းဖြေလျင် ဘာမှစောဒကတက်၍ ရှေ.ဆက်မမေးတော.ပါ ။ သို.သော် နိုင်ငံတော် ဘတ်ဂျက်ငွေဖြင်. ဆောက်ထားပါသည်ဆိုလျှင် မရှင်းတာလေး အနည်းငယ်ရှိပါသည် ။ နိုင်ငံတော်ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်အား တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်ပေးထားသောအိမ်သည် သက်ပြည်.ပင်စင်ယူ၍ (အမှန်မှာ သက်ကျော်ပင်စင်ဟုပင် ပြောရမလိုဖြစ်ပေသည် ။ စကားချပ် ။ ) ရာထူးမှ အနားယူသွားသောအခါ ထိုအိမ်တွင် ဆက်နေ၍ရမရ သိလိုပါသည် ။ နိုင်ငံတကာတွင် အမေရိကန်သမ္မတအဆက်ဆက် သည်ရာထူးမှ နှစ်စေ.၍ဆင်းသွားသောအခါ အိမ်ပေါ်မှ ဆင်းပေးရပါသည် ။ နောက်သမ္မတနေရန် အိမ်အသစ်ထပ်ဆောက်ရရိုး ထုံးစံမရှိပါ။ အိမ်ဖြူတော်သည် လေးနှစ်တစ်ခါ (သို.မဟုတ် ) ရှစ်နှစ်တစ်ခါ သမ္မတများ ပြောင်းနေပါသည် ။ ဗြိတိန်တွင်လည်း ၀န်ကြီးချုပ်အသစ် တက်လာသောအခါ ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်းသည် လန်ဒန်မြို. အမှတ် (၁၀ ) ဒေါင်းနင်းလမ်းနေအိမ်မှ ထွက်ခွာပေးကြရစမြဲဖြစ်သည် ။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း တပ်မတော်သားဝန်ထမ်းများသည် အသက် (၆၀) ပြည်.၍ ပင်စင် ယူသောအခါ ရရှိထားသော လိုင်းခန်း (သို.မဟုတ် )အရာရှိအိမ်ယာကို စစ်တပ်သို. ပြန်အပ်ရပါသည် ။ က.ပ.စ တွင် အလုပ်လုပ်သော ကျွန်တော်၏ မိတ်ဆွေ တပ်မတော်သားတစ်ဦးသည် ပင်စင်ယူသောအခါ နေစရာမရှိတော.သဖြင်. သူတို.မိသားစုထဲမှ တစ်ယောက်ကို အလုပ်ထဲတွင် ပြန်သွင်းထားပြီးမှ ထိုအိမ်ယာကို ပြန်နေခွင်.ပြုရန် လျှောက်လွှာတစ်ခါပြန်တင်ကာ ဘောင်ဝင်အောင် ဆောင်ရွက်ရပါသည် ။ အခြား အရပ်ဘက်ဝန်ထမ်းများလည်း ထိုနည်းနှင်နှင်ဖြစ်ပါသည် ။ ၀န်ထမ်းဘ၀က ရခဲ.သောအိမ်သည် ပင်စင်ယူသောအခါ အပြီးအပိုင် ရလိုက်သည်ဟူ၍လည်း မကြားဖူးပါ ။ ထို.ကြောင်. တပ်ချုပ်ကြီး( ဟောင်း) ၏အိမ်သည် ကိုယ်ပိုင်အိမ်လား ၊နိုင်ငံတော်ပိုင်အိမ်လား သိလိုခြင်းဖြစ်ပါသည် ။
ဒုတိယတစ်ချက် သိလိုသည်မှာ ပင်စင်လစာကိစ္စ ဖြစ်ပါသည် ။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် မတ်လ (၃၁) ရက်နေ. မှစ၍ ပင်စင်ဦးစီးဌာနမှစ၍ ခံစားခွင်.ပြုလိုက်သည်. ပင်စင်လစာငွေများမှာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ (ငြိမ်း) ၏ ပင်စင်လစာမှာ တစ်လလျင် ကျပ် သိန်း (၁၀၀) ၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမောင်အေး (ငြိမ်း) မှာ တစ်လလျင် ကျပ်သိန်း (၈၀) ခံစားခွင်. ရှိသည်ဟုဆို၏ ။ ၂၀၀၈ ဖွဲ.စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အခန်း (၃) ပုဒ်မ (၅၈) တွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် တစ်ဝန်းလုံးတွင် နိုင်ငံသားအားလုံး၏ အထွတ်အထိပ်နေရာ ရရှိသည်ဟု ဖော်ပြပါရှိ၏ ။ ထိုသို.ဆိုလျင် ဖွဲ.စည်းပုံဥပဒေအရ နိုင်ငံတော်၏ အထွတ်အထိပ်ဖြစ်သည်ဟုဆိုသော သမ္မတဦးသိန်းစိန်က လုပ်ခလစာ တစ်လလျင် သိန်း (၅၀ )ပဲ ရနေပါလျက် အထွတ်အထိပ်မဟုတ်တော.သော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်၏ ပင်စင်လစာငွေမှာ အထွတ်အထိပ်ထက် နှစ်ဆများနေသည်မှာ ဖွဲ.စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင်. ညီညွတ်ခြင်းရှိမရှိ ၊ ဖွဲ.စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ချိုးဖောက်ရာရောက်မရောက် သိရှိလိုပါသည်ခင်ဗျား ။
တစ်ဖန် နိုင်ငံရေးဆုငွေ (အရပ်အခေါ် ဂရယ်ဂျူတီကြေး) ချီးမြှင်.ရာတွင်လည်း အငြိမ်းစား ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွေ၏ ခံစားခွင်.မှာ သိန်းပေါင်း ( ၂၃၀၀ ) ဖြစ်သည်ဟု သိရပါသည် ။ ထိုကိစ္စသည် ကောလဟလလား တကယ်လား သိလိုပါသည် ။ တကယ်ဖြစ်ပါက Gratuity ကြေး သိန်း (၂၃၀၀ ) ရအောင် တွက်လိုက်သော တွက်နည်းစနစ်ကို သိလိုပါသည် ။ သာမန်အားဖြင်. ၀န်ထမ်းများ အငြိမ်းစားယူသောအခါ Gratuity (ခေါ်) လုပ်သက်ခံစားခွင်. တွက်ချက်သော ပုံသေနည်းမှာ ကျွန်တော် သိသလောက် အောက်ပါအတိုင်း တစ်နိုင်ငံလုံး တွက်ကြပါသည် ။
အငြိမ်းစားမယူမီ နောက်ဆုံးရခဲ.သော လစာ x လုပ်သက် ÷ ( ၂ ) ဖြစ်ပါသည် ။ ဤနည်းဖြင်.တွက်ချက်ပါက ဗိုလိချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ၏ လုပ်သက်ကို (၄၅ )နှစ်ဖြင်. စဉ်းစား၍ တွက်ချက်လျင် သူ၏မူရင်းလစာမှာ တစ်လလျင် သိန်း (၁၀၀ ) ရှိပါမှ ဂရယ်ဂျူတီကြေး သိန်း ၂၃၀၀ ခန်. ရပေလိမ်.မည် ။ ထို.ကြောင်. ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ၏ မူရင်းလစာမှာ တစ်လ သိန်းတစ်ရာလား ၊ ထိုသို. သိန်းတစ်ရာ လစာရခဲ.လျင် ပင်စင်ကြတော. ဘယ်လိုလုပ် တစ်လ သိန်းတစ်ရာ ဖြစ်သွားသလဲ မရှင်းပေ ။ ပင်စင်တွက်နည်းမှာ နောက်ဆုံးရလစာကို လုပ်သက်နှင်.မြှောက်ပြီး တပ်မတော်သားဆိုလျင် (၅၀ ) နှင်. စားရပါသည် ။ အရပ်ဘက်ဝန်ထမ်းဆိုလျင် ( ၇၀ ) နှင်. စားရပါသည် ။ တစ်လလျင် ယခင်က လစာ သိန်း (၁၀၀ ) ရခဲ.လျင်တော. လုပ်သက် (၄၅ )နှစ်နှင်. မြှောက်ကာ (၅၀ ) နှင်.စားလိုက်သောအခါ သိန်း (၉၀) ရပါသည် ။ တွက်နည်းတွင် တပ်မတော်သားများအတွက် မူရင်းလစာနှင်.အတူ အရည်အချင်းလစာ ၊ နှစ်တိုး ၊ အိမ်ငှားခများပါ ထပ်ထည်.လေ.ရှိရာ ဤသိန်း (၉၀ ) မှ သိန်း (၁၀၀ ) ရသွားသည်ဆိုလျင် ဖြစ်နိုင်ပါသည် ။
ဆိုလိုသည်မှာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ၏ ပင်စင်မယူမီက လစာမှာ တစ်လလျင် သိန်း (၁၀၀ ) ဖြစ်ခဲ.လျှင်တော. ပင်စင်ကြေး သိန်းတစ်ရာဆိုတာရော ၊ လုပ်သက်ခံစားခွင်. ( Gratuity ) သိန်း (၂၃၀၀ ) ဆိုတာရော စာရင်းကိုက်ပါသည် ။ သို.သော် ပြသနာမှာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးတို. ယခင်ကလစာ ဘယ်လောက်ယူခဲ.ပါသည်ဟု နိုင်ငံတော်ပြည်သူများကို တစ်ခါမှ လူရာသွင်း၍ မကြေငြာခဲ.ခြင်းဖြစ်သည် ။ ထို.ကြောင်. ကျွန်တော် သိလိုသည်မှာ ပြည်ခိုင်ဖြိုးအသင်းကြီး၏ မူလတည်ထောင်သူ နာယကကြီး ဦးသန်းရွေ၏ ပင်စင်မယူခင်က ခံစားခဲ.သော တရားဝင်လစာသည် တစ်လလျင် သိန်း (၁၀၀ ) ကျပ် ဟုတ်မဟုတ် သိလိုပါသည် ။ မဟုတ်ခဲ.လျင် ပင်စင်နှင်. ဂရယ်ဂျူတီကြေးကို မည်သည်.တွက်နည်းဖြင်. တွက်လိုက်သလဲဆိုတာ သိလိုပါသည် ။ ဟုတ်ခဲ.လျင် လုပ်ခလစာ တစ်လလျင် ကျပ်သောင်းဂဏန်းဖြင်. တစ်နိုင်ငံလုံး နှစ်ပေါင်းများစွာ ပင်ပန်းဆင်းရဲနေချိန်တွင် ဤမျှများသော လစာကို မည်သည်.အချိုးချ လစာစနစ်ဖြင်. ရယူခဲ.သလဲ သိလိုပါသည် ။
နောက်တစ်ခု သိလိုသည်မှာလည်း ပြည်ခိုင်ဖြိုးဥက္ကဟောင်းနှင်. ဥက္ကဌသစ်၏ ပင်စင်လစာအကြောင်းဖြစ်သည် ။ တပ်မတော်ပင်စင်လစာအဖြစ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ဥက္ကဌဟောင်း လက်ရှိ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်သည် တစ်လ ကျပ်သိန်း (၅၀ ) ပင်စင်ရသည်ဟု သိရပါသည်။ လက်ရှိပါတီဥက္ကဌလည်းဖြစ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယကလဲဖြစ်သူ၊ သူရဦးရွှေမန်းသည်လည်း ပင်စင်လစာ တစ်လ သိန်း (၅၀ ) ဟု သိရပါသည် ။ ထိုမှတစ်ဖန် လက်ရှိသမ္မတလစာ အဖြစ် ဦးသိန်းစိန်က တစ်လလျင် သိန်း(၅၀ ) ၊ ဦးရွှေမန်းက ပြည်သူ.လွှတ်တော်ဥက္ကဌရာထူးအတွက် လစာ တစ်လလျင် (၃၅) သိန်း ရနေပြီဖြစ်သည် ။ ထိုသို.ဆိုလျင် ကျွန်တော် သိလိုသည်မှာ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ဥက္ကဌဟောင်းနှင်. လက်ရှိဥက္ကဌသစ်တို.သည် လက်ရှိရာထူးအတွက်လဲ လစာယူသည် ၊ တပ်မတော်ပင်စင်အတွက်လဲ သိန်း (၅၀ ) ၊ (၃၅) သိန်း စသည်ဖြင်. နှစ်ပြန်နှစ်လဲယူနေကြပါသလား ၊ လစာတစ်မျိုးထဲပဲ ယူပါသလား၊ လစာနှစ်မျိုးကို တစ်ပြိုင်တည်း ရယူခံစားနေကြပါလျင် တိုင်းပြည်ဘဏ္ဍာကို ထိုသို.ရယူခံစားခြင်းမှာ ဖွဲ.စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင်. ညီညွတ်ပါရဲ.လား ဟူ၍ဖြစ်ပေသည် ။
နောက်ထပ်မေးခွန်းမှာ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မဲဆွယ်စည်းရုံးစဉ်ကာလနှင်. သက်ဆိုင်သည် ။၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပြည်သူလူထုကို ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီက လမ်းများ ခင်းပေးခြင်းလဲ ပါဝင်ပါသည် ။ ကျွန်တော် သိလိုသည်မှာ ထိုသို.မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုအဖြစ် ခင်းပေးသော ကွန်ကရစ်လမ်းများသည် နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာငွေဖြင်. ခင်းပေးသည်လား ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ၏ ကိုယ်ပိုင်ငွေဖြင်. ခင်းပေးတာလား သိလိုရင်းဖြစ်သည် ။
နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာဖြင်. ခင်းပေးသည်ဆိုပါက နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာကို နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခု၏ မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုအတွက် သုံးခွင်.ရှိမရှိ သိလိုပါသည် ။ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ၏ ကိုယ်ပိုင်ရန်ပုံငွေဖြင်. စေတနာသက်သက် ခင်းပေးခဲ.သည်ဟုဆိုလျင် ကျေးဇူးတင်ပါသည် ။ တစ်ခုထပ်မေးချင်သည်မှာ ပြည်ထောင်စုကြံ.ခိုင်ရေးနှင်.ဖွံ.ဖြိုးရေးပါတီနှင်. ရန်ကုန်မြို.တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသည် ဘိလပ်မြေဂိုဒေါင်တစ်ခုကို နှစ်ဖွဲ.အတူ မျှသုံးပါသလား ၊ နှစ်ဖွဲ.ပူးတွဲ၍ ပိုင်ဆိုင်ပါသလားဟု သိချင်စိတ်လဲ ဖြစ်မိပါသည် ။ အဘယ်.ကြောင်.ဆိုသော် ကျွန်တော် နေထိုင်သော မြောက်ဥက္ကလာပမြို.နယ် ၊ (ဆ) ရပ်ကွက် အတွင်းမှ လမ်းတစ်လမ်းကို ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီမှ မဲဆွယ်သည်.အနေဖြင်. ကွန်ကရစ်လမ်း ခင်းပေးပါသည်။ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီမှ ခင်းပေးသည်.အတွက် ကျေးဇူးတုန်.ပြန်သောအနေဖြင်. လမ်းထဲမှ လူငယ်များ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီသို. ၀င်ကြရပါသည် ။ ပါတီတံဆိပ်ပါသော တီရှပ်အကျီ များ ၀တ်ကြရပါသည် ။ လမ်းခင်းရန်အတွက် ဘိလပ်မြေထုတ်သောအခါ ကျွန်တော်တို.လမ်းထဲမှ လူဆယ်ဦးခန်. သူတို. ခေါ်သောကားဖြင်. လိုက်သွားရပါသည် ။ ဘိလပ်မြေ သွားထုတ်ရသောဂိုဒေါင်မှာ ရန်ကုန်မြို.တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ ပိုင်ဆိုင်သော အစိုးရဌာနဆိုင်ရာ ဂိုဒေါင်ဖြစ်ပါသည် ။ ထို.ကြောင်. ကျွန်တော် ယနေ.အထိ မရှင်းသည်မှာ ကျွန်တော်တို. လမ်းကို ကွန်ကရစ်ခင်းပေးသူ ကျေးဇူးရှင်မှာ ရန်ကုန်မြို.တော်စည်ပင်လား ၊ ပြည်ထောင်စုကြံ.ခိုင်ရေးနှင်. ဖွံ.ဖြိုးရေးပါတီလား ဆိုသည်ကို သဲသဲကွဲကွဲ မဆုံးဖြတ်တတ်ပါ ။
နောက်ထပ် မသဲကွဲသော အချက်တစ်ခုကိုလည်း တစ်လက်စထဲ မေးပါရစေ ။ ကျွန်တော်သည် ဧည်.လမ်းညွန်အဖြစ် ပုဂံဒေသဘက်သို. သွားသောအခါ အညာဒေသ (အထူးသဖြင်.) ကျောက်ပန်းတောင်းနှင်. ညောင်ဦးကြား ရွာအချို.တွင် ပြည်ခိုင်ဖြိုးရွာ ဟူသော ကျောက်စာတိုင်လိုလို ကမ္ဖည်းမော်ကွန်းလိုလို ဆိုင်းဘုတ်များကို ရွာထိပ်ကားလမ်းနဘေး လူမြင်သာသော နေရာများတွင် မကြာခန တွေ.ရပါသည် ။ ပြည်ခိုင်ဖြိုးသည် နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် အသွင်မကူးပြောင်းမီ ပြည်ခိုင်ဖြိုးအသင်းကြီးအဖြစ်ရှိစဉ်က နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာငွေဖြင်. ရွာကို ကူညီခဲ.သဖြင်. ပြည်ခိုင်ဖြိုးရွာဟု ဂုဏ်ဖော်ကာ ကျောက်တိုင် စိုက်ထူခဲ.ခြင်းဖြစ်မည် ။
သို.သော် ပြည်ခိုင်ဖြိုးသည် နာမည် ၊ တံဆိပ် ၊ ဆောင်ပုဒ် မပြောင်းပဲ ပြည်ခိုင်ဖြိုးအမည်ဖြင်.ပင် နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် ကူးပြောင်းရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ရာ အရင်ခေတ်က နိုင်ငံတော်ပိုင် (ပြည်သူ.ငွေ)ဖြင်. ထောက်ပံ.ကူညီခဲ.သော ကျေးရွာတစ်ရွာ၏ အမည်ကို ယခုအခါ နိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်နေသော ပါတီအမည်ဖြင်. ပြည်ခိုင်ဖြိုးရွာဟု ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ် ရေးထိုးထားခြင်းမှာ နိုင်ငံတော်ငွေဖြင်. ပါတီအတွက် မဲဆွယ်နေခြင်းဖြစ်သောကြောင်. ဤကိစ္စသည် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေဖြင်. ညီညွတ်၏ မညီညွတ်၏ကို သိလိုပါသည် ။
နောက်ဆုံးအနေဖြင်.ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဌ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်အေး (ငြိမ်း) အကြောင်းကို မေးမြန်းလိုပါသည် ။ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဦးတင်အေးသည် မူလက ပြည်ထောင်စုကြံ.ခိုင်ရေးနှင်. ဖွံ.ဖြိုးရေးပါတီဝင်တစ်ယောက်သာမက ပါတီထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်တစ်ဦ ဖြစ်ပါသည် ။၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် မန္တလေးတိုင်း တံတားဦးမြို.နယ် ၊ ပြည်သူ.လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်တွင် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကို ကိုယ်စားပြု၍ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်အရွေးခံခဲ.သူ ဖြစ်ပါသည် ။ လွှတ်တော်အမတ်ဖြစ်ပြီးကာမှ သမ္မတကြီး တာဝန်ပေးခန်.အပ်၍ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဌ ဖြစ်လာသူဖြစ်သည် ။
ကျွန်တော် သိလိုသည်မှာ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဌ ဦးတင်အေးသည် ယခုလက်ရှိတွင် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဝင် ဖြစ်နေသေးပါသလား ၊ ပါတီမှ တရားဝင်နှုတ်ထွက်လိုက်ပြီလား သိလိုပါသည် ။ ပါတီဝင်ဖြစ်နေသေးလျင် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဌရာထူး ယူထားသူသည် နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုခု၏ ပါတီဝင်ဖြစ်နေ၍ ရမရ သိလိုပါသည် ။ ပါတီမှ နုတ်ထွက်ပြီးဖြစ်သည်ဟုဆိုလျင် သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်သည်ပြည်တွင်းပြည်ပ ခရီးစဉ်များတွင် ဦးတင်အေးကို မကြာခန ခေါ်ယူလိုက်ပါစေခြင်းသည် ကြံ.ခိုင်ရေးပါတီဝင် အချင်းချင်းမို. ခေါ်သွားသည်လား ၊ တပ်မတော် D.S.A အပါတ်စဉ် (၉) ကျောင်းဆင်းဘက်ချင်းမို. မျက်နှာသာပေးကာ ခေါ်သွားသည်လား သိလိုပါသည် ။
ထိုသို. တစ်ပါတီထဲမှ တက်လာသူ သမ္မတနှင်. ရွေးကောက်ပွဲ ဒိုင်လူကြီးလုပ်မည်.သူတို. ရင်းနှီးလွန်းနေခြင်းသည် နောင်ရွေးကောက်ပွဲများတွင် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ အသာစီးရစေရန် အားသာချက်ဖြစ်မဖြစ် သိလိုပါသည် ။ တစ်ဖန် ဦးတင်အေးက ၂၀၁၂ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်စည်းရုံးစဉ်ကာလများတွင် အတိုက်အခံပါတီကြီးတစ်ခုမှ ပါတီဝင်အချို.သည်ကြယ်ငါးပွင်.အလံများကို ကိုင်ဆောင်ခဲ.ကြသဖြင်. အလံတော်ဥပဒေအရ အရေးယူ၍ ရသည် ၊ ကန်.ကွက်သူရှိလျင် အရှုံးပေးပစ်မည်ဟု ပုသိမ်ခရီးစဉ်တွင် မိန်.ကြားခဲ.ပါသည် ။ ထိုအခါ သတိရ၍မေးလိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနှင်. ဖွံ.ဖြိုးရေးပါတီညီလာခံကြီးတွင် တည်ဆဲသုံးရောင်ခြယ် နိုင်ငံတော်အလံကို ပြောင်းပြန်ဇောက်ထိုး လွှင်.ထူခဲ.ခြင်းကိုအ လံတော် ဥပဒေအရ အရေးယူ၍ ရမရ ၊ ပါတီမှ အရေးယူခဲ.ခြင်း ရှိမရှိ သိလိုပါသည် ။
ကျွန်တော် သိလိုသော အကြောင်းအရာ မြောက်များစွာ ရှိပါသေးသည် (ဥပမာ အစိုးရအဖွဲ.၀င် နိုင်ငံ.ခေါင်းဆောင်များနှင်. လွှတ်တော်အမတ်များ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုဓနဥစ္စာထုတ်ဖော်ကြေငြာရေးအဆိုကို ဘာကြောင်. လွှတ်တော်တွင် ပြည်ခိုင်ဖြိုးအမတ်များ ကန်.ကွက်ကြသည် ၊ White Card ကိုင်ထားသော နိုင်ငံသားမဟုတ်သူ ဘင်္ဂလီများ မဲပေးခွင်. ၊ ပါတီထောင်ခွင်.ပြုထားခြင်းကို လာမည်. ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဘယ်လို သဘောထားသည် ၊ စသည်ဖြင်. ) ။ သို.သော် အလုပ်မအားသည်.ကြားထဲမှ လူကြီးများ ခေါင်းခြောက်မည်စိုးသောကြောင်. ဤမျှသာ မေးခွန်းမေးလိုက်ပါသည် ။ တကယ်မရှင်း၍ မေးခြင်းဖြစ်၍ ရိုင်းတာပါခဲ.လျှင် ခွင်.လွတ်စေချင်ပါသည် ။ ကျွန်တော် သိလိုသည်များကို တိတိကျကျ မှန်မှန်ကန်ကန် မြန်မြန်ဆန်ဆန် သိရသည်နှင်. ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ပြည်ထောင်စုကြံ.ခိုင်ရေးနှင်.ဖွံ.ဖြိုးရေးပါတီသို.၀င်ပါမည် ။ မိသားစုကိုလည်း ၀င်စေပါမည် ။ အခြားသူများကိုလည်း ၀င်ဖို.တိုက်တွန်းပါမည် ။ ကျွန်တော်.အတွက်ပါတီဝင်လျှောက်လွှာတစ်စောင် ချန်ထားပေးပါခင်ဗျား ။
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 8:30 PM